ပင်တိုင်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 455
ကာတွန်း အောင်မော် - တောင်ပြို ကမ်းပြို မမှန်းရဲသူတွေ
နှစ်(၉၂) နှစ် ပြည့် အမျိုးသားနေ့ (Than Win Hlaing)
> ၈ လေးလုံး ဆိုတာ အောင်ပွဲလား၊ မကြေပွဲလား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၉ ၊ ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့က မြန်မာပြည်ရဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်နဲ့...
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တဦးတည်းပဲလား ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၁ ဒီတပတ် ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့ဆီမှာ ဆရာ့ကျန်းမာရေးကိုပဲ အဓိကမေးဖြစ်ပါတယ်။ ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံ စကားပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် ယနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ...
Interview with U Win Tin – Is he out of touch with reality?
> မျက်မှောက်ခေတ်က လူတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဦးဝင်းတင် မျက်ခြေပြတ်နေပြီလား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၁ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ မိုးမခ အင်တာဗျူးမလုပ်ဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားတယ်။ အဓိကပြသနာကတော့ တယ်လီဖုံးလိုင်းတွေကြောင့်ပါ။ ဖုံးဆက်လို့...
U Win Tin – NLD for the People, CRPP and Suu’s Bagan Trip
> လူထုကို မျက်နှာမူတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ စီအာရ်ပီပီ နဲ့ ဒေါ်စုခရီးစဉ် ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၁၁ ဆရာရေ ဇွန် ၂၈ ကြံ့ဖွံ့အစုိုးရသစ်ရဲ့ အကြောင်းကြားစာနဲ့ ချက်ခြင်းလိုလိုပဲ...
U Win Tin – India, Eu & Burmese Regime New Foreign Policy
> အိန္ဒိယ၊ အီးယူခြေလှမ်းများ နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ပေါ်လစီသစ် ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၁ အိန္ဒိယ၀န်ကြီးအဖွဲ့က အခုမြန်မာပြည်ကို အစိုးရခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်လာတယ်။ ဘာထူးခြားတယ် ထင်ပါသလဲ ဆရာ။...
Interview with U Win Tin – Civil War, Anmesty & Monetary Crisis in Burma
> ပြည်တွင်းစစ်၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် နဲ့ ဒေါ်လာဈေး ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၁ “လက်ရှိတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေကို စစ်တိုက်နေတာက လွှတ်တော်ရဲ့သဘောထားလား၊ အခြေခံဥပဒေရဲ့ ဘောင်အတွင်းကနေလား။ စစ်တပ်ရဲ့...
> ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ နှစ်လည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်မှုကြိုဆိုတဲ့ ဦးဝင်းတင်စကား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၁ လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ နှစ်လည် မေ ၂၇...
dagon taryar – u win tin
> ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပန်ကြားတဲ့ ဆရာဒဂုန်တာရာ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ မေ ၁၅၊ ၂၀၁၁ ယခင်တပတ်က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ မိတ်ဆွေများက ရှမ်းပြည်နယ် အောင်ပန်းရောက် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာရဲ့ ၉...
Question for U Win Tin – Burmese has its own internet, Burmese version
> မိုးပေါ်မှာ ကမ္ဘာ့ကြီးရဲ့ အင်တာနက် ရှိတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာတော့ မြေလျှောက်တဲ့ မြန်မာ့အင်တာနက် ရှိတယ် ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ မေ ၅၊ ၂၀၁၁ ဒီတပတ်ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့တဲ့ဆီမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ စာနယ်ဇင်း၊...
Signature Campaign in Burma vital point – U Win Tin
> မြန်မာပြည်သူ၏ ဆန္ဒကို လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ဖော်ခြင်း ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၁ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့က စတင်ပြီးတော့ မြန်မာပြည်တွင်းက ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူ လူငယ်တွေ ကွန်ယက်တွေကနေပြီး...
Interview with U Win Tin – Support Unity – Say No to anti-Unity
> ညီညွတ်ရေးကို ဦးတည်ရုံနှင့်မပြီး၊ မညီညွတ်ရေးကိုလည်း ငြင်းပယ်ကြ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၁ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးကာလ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောဖြစ်တဲ့ဆီမှာ မြန်မာကွန်မြူနီတီအတွင်း၊ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတွေအတွင်းမှာ အထူးခေတ်စားတဲ့ စကားလုံးတခုအကြောင်း...
Interview with U Win Tin – Regime’s Government – the perspective
> ကြံ့ဖွံ့အစုိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ကို ဘယ်လို သဘောထားသလဲ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၁ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ နအဖစစ်ကောင်စီရဲ့ ကြံ့ဖွံ့လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အစုိုးရတရပ်ဟာ နိုင်ငံတော်အာဏာကို...
Interview Wiht U Win Tin – Burma still in revolt for 66 years
> ဖက်ဆစ်တွေ ဆက်တော်လှန်နေရတုန်းပဲလား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၁ ၆၆ နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို အင်န်အယ်ဒီက ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ဆီမှာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့လို့ ခေါင်းစီးကို တတ်ထားတယ်။ သာမန်...
U Win Tin – Differences , Lybia, Burma & Japan
> လစ်ဗျား၊ မြန်မာနဲ့ ဂျပန်ပြည်က နိုင်ငံသားများ ဘာတွေ ကွဲပြားသလဲ ဥိးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၁ ဒီတပတ်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာက...
Is Regime’s Luttaw hasapolitical role for Burma
> စစ်အစိုးရရဲ့ လွှတ်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်က အရေးပါ၊ အရာဝင် ရဲ့လား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ မတ် ၉၊ ၂၀၁၁ ယမန်နေ့ကစကားပြောဆိုဖြစ်တဲ့ဆီမှာ အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ သူရဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အား၊ အခန်းကဏ္ဍကို လက်ရှိအနေအထားနဲ့ ဘယ်လိုသုံးသပ်သလဲ...
Interview with U Win Tin – Comparing Egypt and Libya then our Burma
> အီဂျစ်နဲ့ လစ်ဗျား အာဏာရှင်တို့ဆီက သင်ခန်းစာများနဲ့ မြန်မာပြည် ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၁ သည်တခေါက်မေးချင်တာက ကမ္ဘာမှာ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ပလ္လင်တွေကို ပြည်သူတွေက ကိုင်လှုပ်နေကြပြီ။ ၂၀၁၁...
> နိုင်ငံတော်ကိုယ်တိုင်က အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်နေပြီလား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၁ ဒီတပတ် ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ ဆုံတွေ့စကားပြောဖြစ်တဲ့အခါမှာ အဓိကမေးဖြစ် ပြောဖြစ်တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်အယ်ဒီကို စစ်အစိုးရအာဘော် သတင်းစာများကနေပြီးတော့ ကြေကွဲဖွယ်...
Armed Forces and the Egypt’s Revolution
> အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ လူထုတော်လှန်ရေးနဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်ကဏ္ဍ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၁ ယမန်နေ့ညနေခင်းမှာ အီဂျစ်ပြည်သူလူထုက အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းသော လူထုအုံကြွမှု၊ သပိတ်တိုက်ပွဲနဲ့ လက်နက်မဲ့ တော်လှန်ရေးနဲ့ ၁၈...
Interview with U Win Tin – Uprising, Army and Polical Forces
> နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းများ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော် ပြီင်္းတော့ နိုင်ငံရေးအင်အားစု ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၀ ပထမဦးဆုံးကတော့ ဆရာရေ … အင်န်အယ်ဒီရဲ့ တရားဝင်ပါတီဖြစ်တည်မှုကို စစ်အစိုးရတရားရုံးက အယူခံခွင့်...
Interview with U Win Tin – Can we make friends with 600 political prisoners
> နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၆၀၀ ကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ခွင့် ရှိမလား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၁ ယခင်အပတ်က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုခဲ့ရာမှာ အင်န်အယ်ဒီက ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူမှုထောက်ကူအဖွဲ့က ကူညီစောင့်ရှောက်နေတဲ့...
Page 455 of 457«1...453454455456457»